Lammiileen Eertiraa sarbamni mirga namoomaa irra ga'e UN duratti ragaa bahan - BBC News Afaan Oromoo
Lammiileen Eertiraa sarbamni mirga namoomaa irra ga'e UN duratti ragaa bahan
Image copyright Elsa Churum
Goodayyaa suuraa Waltajjii ragaa bahuumsa
Eertiraanonni kunneen miidhama mirgaa ofii fi maatii isaaniirra ga'eef ragaa ta'aniiru.
Namoota qaamaan Niiwuyoorkitti argamuun akkasumas Iskaayipiin ragaa ba'an keessaa:
Shamarree Haannaa Pheexiroos, abbanshee Pheexiroos Salamoon waggoota 16 akkasumas haatishee Asteer Yohaannis ammoo waggoota 14 himataa fi murtee mana murtiin ala hidhamanii turuu fi isheenis mana hidhaa galuu himtee jirti.
Sababa amantaa hordoftuuf ji'oota 32'f koonteeyinarii keessatti hidhamtee amantiishee akka geeddartu gaafatamnaan diduusheetiin yeroo hedduu tumamuun qaama hir'uu ta'uushee kan himte Faarfattuu Heelan Birhaane ishee kan biraati.
Pireezidantii mootummaa Chaad Huseen Haabre dhaan miidhamni irra ga'uu kan dubbatu Obbo Suleemaan Gungung gidiraa namoota biroo irratti ga'aa tures himaniiru.
Akkasumas qondaaltuu giddu galaa dhimmoota haqaafi seeraa Kaanaadaa kan ta'an Aadde Amaandaa Gahiramaanii, Eertiraa keessatti namootni yakka kana raawwatan akkamitti gaafatamuu akka danda'an irratti muuxannoo isaanii dhiheessanii jiru.
Walga'ii kanarratti Shamarree Haannaa Pheexiroos ''akkuma dargaggoota Eertiraa kan biroo, warreen tajaajila dirqamaa kennaa jiran irratti gidiraan ga'e, anarras ga'ee waan beekuuf naa gala'' jettee jirti.
''Dabalataanis sababa hin beekamneen haadhaa fi abbaan keenya hidhamuu isaaniitiin maatii dhabnee dararaa argaa jirru dhaabbileen mirga namoomaas ta'e namni dhuunfaa ni hubatu jedheen abdadha'' jette.
Faarfattuu Heelan gama isheetiin ''yeroo nuti hidhamnee turretti gidiraa gara jebeessummaan nutti raawwatamaa tureen alatti, waardiyyoonni gara mana hidhamnetti hin seenan ture, amma garuu keessa seenuun dubartoota gudeedaa akka jiran dhaga'eera."
Goodayyaa suuraa Namoonni sarbamni mirgaa irra gahe
Kana dura warra amantaa sana hordofetu hidhama ture, amma garuu maatiinis dabalamee hidhamaa jira. Abbaa warraa fi ijoolleeshee waliin hidhamtee kan turte fi ji'oota 4 booda kan lubbuun dabarte Aadde Fiqaaduun ragaa koo tokko dha'' jetti.
Aadde Shiilaa Kiitaaruuz gidiraa lammiilee Eertiraa irratti ga'aa jiru gabaasanii jiru.
Sarbama mirga namoomaa Eertiraatti ga'aa jiruuf wantoota ka'umsa ta'an:
Turtiin tajaajila biyyaalessaa seeraan kaa'ame ji'oota 18 qofa ta'ee osoo jiruu dheerachuun isaa fi dirqamaan loltuu ta'uun bakka jirutti deebi'uu dhabuusaa
Manni maree bakka bu'oota uummataa mirgoota lammiilee eegsisan jiraachuu dhabuunsaa
Manni murtii walabaa fi angoo mootummaa daangaa hin qabne to'atu jiraachuu dhabuu
Gidiraawwan ga'aa jiran:
Miidhaa saalaa, sarba mirga namoomaa, hidhaa fi ukkaamsaa, mirga yaada ibsachuu dhabuu, fi bilisummaa amantii dhorkuun kanneen bal'inaan mullatan keessaayyu.
Keessumaa Daayirektara Waliigalaa dhaabbata Telekoomii fi falmataa duraanii kan ture Salamoon Habtoom adeemsa mana murtii tokko malee firootaa fi jaalleewwan isaa osoo hin argin mana hidhaa seenee waggoota 14 booda lubbuun isaa darbeera kottaa fudhaa yoo jedhaman, maatii isaatti hagam akka ulfaatu yaaduun ni danda'ama jechuun ibsaniiru.
Lammiileen Eertiraa kunneen waan irra g'e hawaasa adduunyaaf akka himan waltajjii kan mijeessan Aadde Eelsaa Chiruum, akkas jechuun dubbatani.
''Wanti amma gateettii lammiilee Eertiraa kanarra taa'ee jiru yeroonsaa dheerachuu fi gabaabbachuu mala malee darbuun isaa hin oolu. Seenaanis waan ta'aa jiru galmeessuu hin dhiisu. Yeroo cinqii akkasiitti dhugaa jiru baafnee dubbachuu baannaan nutis seenaadhaan gaafatamuun keenya hin oolu'' jechuun lammiileen dhugaa fi haqa bira akka dhaabbatan hubachiisanii jiru.